विना अध्ययन अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिनु राम्रो हुन्नः सीईओ, नेप्से| Corporate Nepal
विना अध्ययन अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिनु राम्रो हुन्नः सीईओ, नेप्से
फागुन ५, २०७८ बिहिबार १८:३४
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)का नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्कीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई शेयर बजारमा लगानी गर्न सहज वाताबरण बनाउने बताएका छन् ।
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले शेयर बजारमा लगानीको दायरा बढाउने क्रममा एनआरएनएलाई पनि चाँडै लगानीको सहज वातावरण बनाउन आफू लाग्ने बताएका हुन् ।
कार्कीले शेयर बजारको विषय निकै संवेदनशील रहेको भन्दै पूँजी बजारको विकृति रोक्न आफूले निर्देशन दिईसकेको बताए । अब शेयर बजार प्रविधिमैत्री बन्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ ।
कार्कीले नेप्सेको टीएमएस प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउने बताए । उनले पछिल्लो समय शेयर बजार ओरालो लाग्नुमा अरु कारण नभई सामान्य साइकल मात्रै भएको बताए । कार्कीले विभिन्न गतिविधि र अभिव्यक्तिले शेयर बजार घटाउन बढाउन मद्दत गर्ने स्वीकार गर्दै इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता विकृतिमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको बताए ।
उनले नेस्से र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रतिस्पर्धीको रुपमा नभई सहजकर्ताको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । ब्रोकरको गुणस्तर र संख्या दुवैमा वृद्धि गर्न आफू लागि पर्ने कार्कीले बताए । उनले नेप्सेको टीएमएस प्रणाली सुधार गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।
धितोपत्र बजारमा अर्को पनि स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने हल्ला आफूले पनि भर्खरै सुनेको बताउँदै सीईओ कार्कीले आगामी दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिने नचाहिने कुरामा गहन अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मैले बजारमा अहिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरा सुन्दैछु । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने काम सरकारको हो । तर पनि त्यसमा गहन अध्ययन तथा खोजी र विचार गरेर मात्रै वास्तविकता के हो भन्ने पत्ता लगाउनु जरूरी छ ।’
कार्कीले देशमा उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्नु राम्रो कुरा रहेको बताए । ठूला घरानाहरुको लगानी रहेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने तयारी भइरहेको हल्ला अहिले पूँजी बजारमा चलिरहेको छ । नेपालमा एउटा स्टक एक्सचेञ्ज भइरहेको अवस्थामा अर्को किन र केका लागि ल्याउने भन्ने कुरा निकै महत्वपर्ण हुने बताए ।
लगानीकर्ताहरूको समस्या बुझ्दै समस्याको समाधान गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए । कार्कीले शेयर बजारमा रहेका विकृति हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आफू लागिपर्ने बताए । उनीसँगको थप कुराकानी माथि भिडियोमा पनि हेर्न सकिन्छः
बैशाख ८, २०७९ बिहिबार
मन्त्री झाँक्रीको तर्क– सरकार फेरिएपछि गभर्नरले नछोड्नु पनि गलत हो, हटाउन खोज्नु पनि गलत हो
दिगो र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भनेर बैंकहरुले कृषि कर्जा बढाएका छन्ः घिमिरे
चैत १६, २०७८ बुधबार
‘मोवाइल चोरीपैठारी रोक्न अझै ‘एमडीएमस’ लागू नभए एटीएमा गएर धर्ना दिन्छौं, चावी बुझाउँछौं’
फागुन ५, २०७८ बिहिबार
सरकारले नै एमसीसी अघि बढाउँछ बढाउँदैन् ? टुँगो छैन्, एमालेले मात्रै हतारिएर बोल्नुको के अर्थ ?
माघ २६, २०७८ बुधबार
‘सरकारको ध्यान नेपाली गरगहनाको प्रवर्द्धनभन्दा पनि सुनचाँदी व्यवसायमाथि कडाई गर्नमा छ’
माघ २२, २०७८ शनिबार
मुलुकभर महिला उद्यमी बढाउन काम गरिरहेका छौंः अध्यक्ष महिला उद्यमी महासंघ
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान र कुमारीपाटीमा लञ्च गरियो अपाचे आरटीआर १६० मोटरसाइकल
शेयर बजार उच्च अंकले बढ्दा एक अर्ब ४३ करोडको कारोबार
चार दशकपहिले सिफारिस धानको बीउ नै किसानको रोजाइमा
नबिल दिगो बैंकिङको बार्षिकोत्सवमा ‘नबिल ग्रीन वीक’ मनाइदै
‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग हामी बनाउन सक्दैनौ, बनाइदिए गरिव राष्ट्र भएकाले भाडामा दिउँला’
नेपाली व्यवसायीलाई चीनको भिसाका लागि पहल गर्न आग्रह
कृषिमन्त्री यादवको तर्क– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल भाउ बढेकाले ठेकेदारले ल्याउनै सकेनन्